Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJeya
Embindini weJaffna, uya kufumana olu phawu lutsha, lunomoya, lwangoku, luhle kwaye lunoxolo olunamagumbi okulala ama-3, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, amagumbi amabini okuhlambela agcweleyo, kunye neeshawari ezimbini zangaphandle. I-Deya's Villa ibekwe kwindawo efanelekileyo e-Kondavil East ukutyelela elunxwemeni, itempile kunye nezinye izinto ezinomtsalane zasekhaya. Iveranda enkulu kunye negadi ilindele ukuba uchithe kunye nosapho kwaye uphumle emva kosuku lokubona.
Vula uyilo lombono kunye negumbi lokuhlala elikhulu neliqaqambileyo elinesilingi ekhulayo. Igumbi lokutyela elinokuhlalisa ngokukhululekileyo iindwendwe ezi-6-8 ezinombono wegadi.
Ikhitshi langoku elixhotyiswe ngokupheleleyo liyafumaneka ukuze uyonwabele. Nangona kunjalo, sinokulungiselela umpheki ukuba alungiselele izinto ezikhethekileyo zasekuhlaleni ngentlawulo eyongezelelweyo.
Amagumbi okulala amathathu abanzi ukusuka kwigumbi lokuhlala elineebhedi ezitofotofo kunye neelinen ezisetyenziswa ngexesha lokuhlala kwakho.
Amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo asentshona ngaphakathi kwevilla, kunye neeshawari ezimbini zangaphandle ukuze uzonwabele ngemini eshushu yasehlotyeni. Nceda uqaphele ukuba itanki yamanzi ashushu ekhoyo kuphela kwigumbi lokuhlambela eliphambili.
Ukufumana amava aqinisekileyo, kukho ilitye leSalavai (ilitye lokuhlamba izandla) ecaleni kweshawari yangaphandle ukuba ufuna ukuhlamba iimpahla zakho. Nangona kunjalo, inkonzo yokuhlamba impahla inokulungiselelwa ngentlawulo eyongezelelweyo.
I-villa kaDeya ikwintliziyo yeJaffna. Ukuhamba umgama ukuya kwivenkile enkulu yasekhaya, iindawo zokutyela kunye nezinye izinto eziluncedo. Ukuhamba umgama ukuya kwi-salon, indawo yokuzivocavoca, ikhemesti kunye neofisi kagqirha. Umgama omfutshane wokuqhuba ukuya eKKS Beach, iTempile yaseNallur, iKeerimalai Springs kunye nezinye izinto ezinomtsalane.
Umbuki zindwendwe ngu- Jeya
Uya kuba nokufikelela kwindlu epheleleyo. Umphathi wepropathi uyafumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Kwakhona sinokulungiselela ukuba umpheki alungiselele ukutya, inkonzo yokuhlamba impahla, nesithuthi sohambo lwasekuhlaleni okanye naziphi na ezinye iimfuno zokuhamba ngentlawulo eyongezelelekileyo.
Uya kuba nokufikelela kwindlu epheleleyo. Umphathi wepropathi uyafumaneka ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Kwakhona sinokulungiselela ukuba umpheki alungiselele ukutya, inkonzo yoku…